IKHABINI EDUZE NE-LAS CAÑAS, ENEBHOSHI LASE-PRIVATE
7 km ukusuka eFray Bentos kanye ne-Anglo Heritage Site, amamitha angu-800 ukusuka e-Las Cañas spa. 40 km ukusuka eGualeguaychu. Ukuze ujabulele imvelo, uMfula i-Uruguay, umlando wesiqandisi sangaphambili se-Anglo.
Ikhabethe lingamamitha ukusuka ogwini, iyibhishi elizimele, indawo ethule kakhulu, izindawo zokugeza zokungcebeleka, ukudoba, i-kayaking, ukuhamba ngezinyawo, nokuphumula osebeni lomfula. Sinesevisi eyengeziwe yokugibela izikebhe emfuleni.
Ogwini loMfula i-Uruguay, indawo iyahamba.Iyindawo yasemaphandleni, kodwa eseduze kakhulu nakho konke, ungaya esidlweni sakusihlwa ezindaweni zokudlela ezinhle, uphume ukudansa, uvakashele iminyuziyamu, uye kumamuvi, uyothenga, uvakashele Gualeguaychu zomkhosi, konke eduze kakhulu
Ngizoba senkonzweni yakho ukuze ngikusize uchithe izinsuku ezimnandi